Sida Loo Maalgashado: Hagaha Bilowga ah ee Maalgelinta Suuqa Suuqa 2022
Bogga ugu weyn Sida Loo Maalgashado: Hagaha Bilowga ah ee Maalgelinta Suuqa Suuqa 2022
Hab wanaagsan oo aad naftaada dhaqaale ugu kobciso ayaa ah inaad xoogaa xoogaa dhinac iska dhigto oo aad ku maalgeliso wax qiimo leh.…
Hab wanaagsan oo aad naftaada ugu kobciso dhaqaale ahaan waa inaad xoogaa xoogaa lacag ah dhinac dhigto oo aad ku maalgeliso wax qiimo leh.
Maalgashadayaasha qaarkood, kaydka waxaa loo yaqaanaa inay yihiin qorshayaal maalgashi oo aad u wanaagsan xitaa waqtiyada kaydka badan la iibinayo.
Xagee su'aasha dhabta ahi tahay 'sidee baad ku bilaabi kartaa'? Hadda, habka maalgashigu waa mid sahlan oo waxaa lagu samayn karaa internetka. Sidoo kale, waxaa jira adeegyo aad ku maalgashan karto kaydka lacag aad u yar.
Tilmaamahan bilowga ah ee ku aaddan maalgashiga suuqa saamiyada wuxuu u adeegi doonaa hage tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan sida aad ku bilaabi karto inaad maal gashato lacagtaada adigoon dareemin walwal ama cabsi in lacagtaadu ku dhacdo badda buluugga ah.
Waa kuwan wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad maanta u bilowdo.
Waa Maxay Maalgashi?
Sida laga soo xigtay Wikipedia, in la maalgashado waxaa loola jeedaa in lacag loo qoondeeyo filashada faa'iidooyinka qaarkood mustaqbalka. Dheefta laga helo maalgashiga waxaa lagu magacaabaa soo noqosho.
Markaad maalgashato, waxaad iibsanaysaa wax adiga oo rajaynaya inaad ka faa'iidaysato mustaqbalka.
Dhaqaale ahaan, maalgashigu waa soo iibinta badeecado aan la kharash garayn laakiin loo adeegsado in hanti lagu abuuro mustaqbalka.
Sidoo kale, waxay ku imaan kartaa qaab hanti lacageed oo lagu iibsaday fikradda ah inay bixin doonto qaddar ka sarreeya markii la iibiyay waqtiga soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, maalgelinta dhaqameedyada waxaa ka mid ah waxyaabo ay ka mid yihiin hantida shirkadda, hantida maguurtada ah ama amaahda qof ama shirkad lagu beddelayo dulsaar.
Maxay Tahay Inaan Maal Gashado?
Waxaa jira wax badan oo ah inaad lacagtaada ku seexato bangiga magaca kaydka. In kastoo, bangigu uu lacagtaada ammaan ahaan u ilaalin doono, marka sicir -bararku dhaco, waxay ka dhigaysaa in doollar kasta oo qarsoon uu waxyar ka yaraado sannad walba.
Si aad u ogaato, doolar aad maanta bangiga gelisay wuxuu u dhigmaa wax yar berri.
Markaad maalgashato suuqa saamiyada, dollarkaagu wuxuu u shaqeeyaa sidii uu u samayn lahaa doollar badan. Lacagtan cusubna waxay kuu soo kordhin doontaa mid intaas ka badan. Isku soo wada duuboo, waxay u shaqeeyaan si ay kuu kasbadaan lacag intaa ka badan.
Xoogga barafka ee koritaanka waxaa loo yaqaanaa kobaca isku -dhafan.
Waqtiga fog, hantidaadu waxay ka kori kartaa heerka sicir -bararka. Kaydkaagu ilaa hadda waa is-tixraac halkii uu ka lumi lahaa qiimaha sanadihii la soo dhaafay. Tani waxay sahlaysaa keydinta hadafyada fog sida hawlgabka.
Goorma Ayaan Bilaabayaa Maalgelinta Suuqa Suuqa?
Haddii aad sugayso inaad bilowdo maalgashiga markaad haysato raad dhaqaale oo adag, markaa, wax waliba waa khaldan yihiin.
Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu heli karo soo celin adag oo ku saabsan lacagtaada waa iyada oo la maalgashado marka aad yar tahay.
Marka, haddii aadan weli bilaabin, sare u qaad fursaddaada oo kubbadda rog rog!
Faa'iidooyinka Bilaabidda Dhallinyarada
Markay timaaddo maalgelinta, waqtigu waa aaladda ugu awoodda badan. Marka lacagtaada la sii dheeraado, waxaa sii kordheysa shaqada aad u baahan tahay si aad lacag badan iyo faa'iido uga hesho koritaanka.
Intaa waxaa dheer, hal hoos u dhac ku yimaada suuqa uma badna inuu saamayn taban ku yeesho maalkaaga, maadaama aad haysato waqti aad kaga tagto lacagtii la galiyay oo aad dib u soo ceshato qiimaheedii.
Aynu eegno tusaale:
Laga soo bilaabo 1928, celceliska celceliska S & P 500 (qiyaas ahaan 500 oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Mareykanka oo si weyn loogu isticmaalay in lagu qiyaaso suuqa saamiyada) waxay ahayd qiyaastii 10%.
Aynu nidhaahno 25 jir baad tahay oo $ 5,000 ayaad ku maalgelinaysaa S & P 500. Sannad kasta waxaad arki doontaa qiimayn 10% ah oo sii kordhisa lacagtaada. Markaad gaarto 65, waxaad furaysaa koontadaada oo waxaad ogaataa inaad haysato in ka badan $ 226,000. Hadiyad hawlgab oo aad u fiican adiga!
Si kastaba ha noqotee, haddii aad sugto ilaa da'da 35 si aad u maalgashato, qiimahaaga da'da 65 waa kaliya $ 87,000. Wali cajiib ah. Laakiin in ka yar kala bar waxa aad heli lahayd haddii aad bilaabi lahayd 10 sano ka hor.
Marka hore, iska bixi deynta wax-soo-saarka badan leh
Haddii aad weli leedahay deymo leh dulsaar aad u sarreeya, sida kaararka deynta ama amaahda shaqsiyeed, waa inaad sugtaa ilaa aad maalgashato. Lacagtaadu waxay kuugu shaqaynaysaa si adag adiga oo meesha ka saaraya dulsaarkan adag ee dulsaarka ah marka loo eego xaalka suuqa. Haddii aad bixiso 1 USD oo deyn ah, waxaad keydisaa 12%, 14% ama in ka badan oo dulsaarka mustaqbalka ah. Waxaa la filayaa in ka badan maalgashiyadii dhaqameed soo laaban doonaan.
Waa maxay Stock?
Hantidu waa qayb yar oo ka mid ah lahaanshaha meheradda. Saamiyada, oo sidoo kale loo yaqaan "wadaag", waa saamiga ugu yar ee shirkad. Shirkadaha dadweynuhu waxay u oggolaadaan qof kasta inuu iibsado ama ku iibiyo saamiyo sarrifka saamiyada ee shirkadooda.
Haddii aad leedahay kayd, waxaad leedahay qayb ka mid ah shirkadda. Halkaas tag! Haddii aad saami ku leedahay Walmart, ma awoodi doontid inaad sanduuqa qunyar socodka ah ugu wareejiso bakhaarkaaga. Waxaad leedahay xuquuqo gaar ah. Tusaale ahaan, waxaad u codayn kartaa xubnaha Guddiga Agaasimayaasha.
Waa maxay dammaanad?
Adigoo iibsanaya dammaanad, waxaad lacag amaahinaysaa mid ka mid ah shirkadahaan. Shirkadaha, curaarta ayaa sida caadiga ah loo kala qaybiyaa kordhinta $ 1,000, iyada oo dulsaar la ururiyo lixdii biloodba mar, iyadoo wadarta la iibsan karo marka ay qaan -gaadho, tusaale ahaan taariikhda curaarta. Curaarta dawladda waxaa guud ahaan loogu yeeraa “khasnado”.
Ballan -qaadku waa deyn ganacsi sida ay tahay deyn shirkad, bulsho ama dal.
Macnaha Portfolio ee Suuqa Suuqa?
Boortofooliyada waa qayb ka mid ah dhammaan maalgelintaada oo uu hayo dillaal ama bixiye maalgashi. Waxaad yeelan kartaa saamiyada, curaarta ama ETF -yada shaqsiga ah. Wax kasta oo koontadaada ku jira waxay ahaan doontaa boorsadaada.
Si kastaba ha noqotee, iyadoon loo eegin nooca koontada, faylalkaagu wuxuu dabooli karaa dhammaan maalgelintaada maadaama ay ku siinayso fikrad ka wanaagsan soo -gaadhistaada guud.
Kala -duwanaanshuhu Macnihiisu?
Sida aadan lacagtaada oo dhan ugu gelin fikradda saaxiibkaa shirkad cadayga bocorka basbaaska leh, ma doonaysid inaad maalgelin ku samaysato saamiyo ama dammaanad. Kala -duwanaansho micnaheedu waa maalgelin kala duwan.
Sidaa darteed, guushaada ama guuldarradu kuma xirna hal shay.
Si aad si fiican u kala duwanaato, waxaad rabtaa inaad hubiso in maalgelintaadu dhab ahaantii ka duwan tahay. Lahaanshaha saddex shirkadood oo dhar oo kala duwan mar walba waxay ka dhigan tahay inaad la kulantay khataro isku mid ah. Tusaale ahaan, canshuuraha soo dejinta alaabta suufku waxay saamayn ku yeelan kartaa qiimaha saddexda shirkadood isku mar.
Waa maxay Qoondaynta Hantida?
Maalgashadayaasha intooda badan, waxaa jira saddex qaybood oo waaweyn: kaydka, curaarta, iyo lacag caddaan ah. Markaad qoondaynayso hantida, waxaad u qoondaynaysaa maalgashigaaga saddexdan qaybood.
Kaydku wuxuu bixiyaa soo-celin muddo dheer ka fiican, laakiin isbeddello qiimo badan leh. Isbeddelladaan, oo mararka qaarkood 20% kor u kaca ama hoos u dhaca sannad gudihiis, waxay noqon karaan kuwo aad u xanuun badan.
Boondhigyadu waa ka badbaado badan yihiin laakiin waxay bixiyaan soo celin hoose oo amnigaas ah.
Adiga ayaa go'aaminaya qoondaynta hantidaada adiga oo ku xisaabtamaya wakhtiga ay qaadanayso in aad tuurto lacagtaada, rabitaanka khatarta ah, iyo yoolalkaaga.
Waa maxay ETFs?
Iyada oo la adeegsanayo ETFs ama Sanduuqyada Ganacsi ee Sarrifka, waxaad ku iibsan kartaa qaybo yar oo ka mid ah hantida badan hal saami.
ETF waa sanduuq haya hanti badan, curaarta ama badeecado. Sanduuqa ayaa markaa loo qaybiyaa cutubyo laga iibiyo maalgashadayaasha dadweynaha.
ETFs waa ikhtiyaar maalgashi oo soo jiidasho leh maadaama ay bixiyaan khidmadaha hoose, kala duwanaansho degdeg ah, iyo kaydinta saamiyada ( way fududahay in la iibsado oo si dhakhso ah loo iibiyo).
Iibsashada saamiyada ama debaajiga ETF, waxaad marin u heli kartaa maalgashiyo badan, kuwaas oo dhammaantood ku jira ETF -kan.
Hantida ETF badanaa waxay la socotaa tusmada sida S & P 500. Markaad iibsadaan ETF saamiyada, waxaad soo iibsanaysaa faylal dhammaystiran oo ah qaybo yar oo ka mid ah dhammaan saamiyada ku jira tusmada lagu cabiray cabbirka tusmadaas. Tusmo.
Tusaale ahaan, haddii aad iibsatay S & P 500 ETF, waxaad iibsanaysaa hal shay oo kaliya. Si kastaba ha noqotee, ETF -kan wuxuu hayaa saamiyada shirkadaha S&P 500, taas oo macnaheedu yahay inaad runtii leedahay saamiyo yar oo ka kooban 500 shirkadood. Maalgashigaagu wuu kordhaa ama wuu yaraadaa S&P waxaadna kasban doontaa faaiido ku saleysan saamigaaga saamiyada ay bixiyeen 500ka shirkadood.
Lacagta curaarta ah
Boondhiga ETF wuxuu leeyahay dambiil dammaanad ah oo inta badan raaca tusmada, sida ETFs -yada kale.
Lacagahaan waxaa ka mid noqon kara isku darka curaarta dowladda, curaarta shirkadaha la qiimeeyay, iyo curaarta shisheeye. Farqiga ugu muhiimsan ee u dhexeeya haysashada hal curaarta iyo curaarta ETF waa bixinta dulsaarka.
Bondadu waxay kasbadaan dulsaar lixdii biloodba mar. Bond ETFs, si kastaba ha ahaatee, waxay bixiyaan bil kasta sababtoo ah dhammaan curaarta ay sanduuqa haysato waxay kasban kartaa dulsaar waqtiyo kala duwan oo sanadka ah.
Noocyada Xisaabaadka Maalgashiga
Haddii aad rabto inaad iibsato saamiyada, curaarta, ama ETF-yada, waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay halka lagu qabto noocyadan maalgashiga.
Waxaa jira dhowr nooc oo xisaabaadyo ah oo aad ku maalgashan karto. Si kastaba ha ahaatee, kuma noolaan kartid koontadaada caadiga ah. Waa kuwan xulashooyinkaaga.
Kaydinta hawlgabku waa yoolka ugu weyn ee dadka intiisa badan. Qofka caadiga ah ee hawlgab noqda isagoo 62 jir ah, sababtuna tahay doorashadooda ama shaqo ka eryid ama dhibaatooyin caafimaad awgeed, dadka Maraykanka badankoodu waa 20 sano ama ka weyn oo ay u baahan yihiin hanti ay naftooda ku quudiyaan.
Si ay kuugu diyaariso hadafkan weyn, dawladdu waxay bixisaa dhiirigelin canshuureed. Si kastaba ha noqotee, haddii aad maalgeliso akoonnadaas, helitaanka lacagtaadu waxay ku kooban tahay 59 ½. Xaaladaha qaarkood, waxaa jira ganaaxyo inaad lacagtii hore kala baxdo.
Waa kuwan noocyada xisaabaadka bixiya kaydka cashuurta.
Xisaabaadka hawlgabka ee loo-shaqeeyaha kafaala qaaday sida 401 (K), 403 (B), 457, iwm. waxay u ogoladaan shaqaalaha inay si toos ah uga badbaadiyaan jeeggooda hawlgabka. Loo-shaqeeyayaasha qaarkood waxay bixiyaan tabarucaad u dhigma si ay u labanlaabaan kaydka hawlgabkaaga.
Guud ahaan, waxaad ku shubtaa xisaabtaas lacag “canshuur ka hor” ah, taas oo macnaheedu yahay inaadan ku bixin canshuurta dakhliga doolarkan. Lacagta la maalgeliyay way kordheysaa iyadoon canshuur laga qaadin ilaa aad ka noqoto si aad u daboosho kharashaadkaaga nolosha ee hawlgabka. Markaad lacag la baxdo, waxaad canshuur ka bixineysaa bixitaannada. Si kastaba ha ahaatee, dadka badankoodu waxay ku jiraan canshuur ka yar intii hawlgabka ahayd;
Laga bilaabo 2022 waxaad wax ku biirin kartaa ilaa $19,000 sanadkiiba mid ka mid ah akoonnadan, iyada oo tabarucaada loo shaqeeyaha aan la ixtiraamin. Haddii aad tahay 50 sano ama ka weyn, waxaad wax ku biirin kartaa ilaa $24,500 sanadkii.
Dhaqan ahaan ka soo horjeeda Roth IRA
Haddii aadan heli karin koontada hawlgabka ee uu shaqaaleeyo loo-shaqeeyaha, ama haddii tabarucaadkaagii hore la kordhiyay, waxaad sidoo kale furi kartaa koontada keydka hawlgabka shaqsiyeed (IRA) si aad u maal gashato.
Waxaa jira laba nooc oo IRAs ah: dhaqan iyo Roth.
IRA -da dhaqameedku wuxuu u shaqeeyaa sida qorshayaasha canshuurta loo shaqeeyaha. Lacag kasta oo la bixiyo waxaa loola dhaqmaa sidii “canshuur ka hor” waxayna hoos u dhigeysaa dakhligaaga canshuuri karo sanadkaas.
Roth IRA, dhanka kale, waxaa lagu maalgeliyaa dhibco canshuur. Taas micnaheedu waa inaad hore u bixisay canshuurta dakhligaaga. Haddii aad hawlgab noqoto, ma bixin doontid canshuurta dakhliga ama canshuurta faa'iidada raasumaalka. Lacagta adigaa iska leh.
Roth IRAs waxay bixiyaan faa'iidooyin canshuureed oo heer sare ah laakiin waxay diyaar u yihiin kaliya heerarka dakhliga qaarkood. Haddii aad kasbato wax ka badan $ 135,000 sannadkii sidii hal-fayle ahaan ama in ka badan $199,000 oo fayl-gare ah ahaan, xaq uma lihid Roth-IRA.
Laga bilaabo 2022, waxaad bixin kartaa IRA illaa $ 6,000 sanadkii. Haddii aad tahay 50 sano ama ka weyn, waxaad ku darsan kartaa ilaa $ 6,500 sanadkii.
529 Qorshayaasha Kaydinta Kulliyadda
Xisaabaadkaan, oo ay bixiyaan gobol walba, waxay siiyaan cashuur dhaaf waalidiinta u kaydsada kulliyadda. Sida Roth IRA, tabarucaadku waa canshuur laga goosan karo, laakiin dhammaan ka bixitaannada waa canshuur laga dhaafo illaa inta lacagaha loo adeegsado maalgelinta kharashaadka jaamacadda.
Gobolkaaga ayaa laga yaabaa inuu bixiyo cashuur -dhimis ama tabarruc u dhigma si loogu maalgeliyo qorshaha 529 ee degaankaaga, laakiin waxaad isticmaali kartaa 529 gobol kasta. Maadaama gobol kastaa leeyahay khidmado kala duwan iyo ikhtiyaarro maalgashi, waa inaad u heshaa 529 ugu fiican lacagtaada.
Waxaad sidoo kale arki kartaa sida lacag loo keydiyo iyadoo la adeegsanayo this.
Xisaabaadka dillaalintu ma bixiyaan faaiido cashuureed si ay u maal gashadaan laakiin waxay u dhaqmaan sidii koontada caadiga ah si aad u ilaaliso maalgashigaaga. Ku -biirinta sannadlaha ah ee xisaabaadkaan waa mid aan xad lahayn oo mar walba waad heli kartaa lacagtaada.
Lacag caddaan ah ama Lacag caddaan ah
Maadaama maalgashigu uu ahaado mid dheer oo kaliya, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad keydiso lacag si aad u gaarto yoolalka muddada-gaaban. Xaaladdan, xisaab bangi oo dhaqameed ayaa laga yaabaa inaysan ku filnayn. Xisaabaadka hadda jira iyo xisaabaadka kaydku waxay bixiyaan dulsaar aad u hooseeya ama aan lahayn, taasoo la micno ah inaad gabi ahaanba la kulantay sicir barar.
Nasiib wanaag, waxaa jira xisaabaad lacageed oo bixiya dulsaar sare:
CD -ga ama shahaadada dhigaalka waa koontada keydka oo xaddideysa helitaanka lacagtaada muddo cayiman (6 bilood, 12 bilood, 24 bilood, iwm). Haddii aad rabto inaad lacagtaada la baxdo ka hor dhammaadka muddada, ciqaab yar ayaa lagu soo rogi doonaa. Si kastaba ha ahaatee, xisaabaadyadan ayaa sida caadiga ah bixiya dulsaar sare haddii aadan heli karin.
Koontooyinka kaydka wax-soo-saarka sarreeya waa barta dhexe ee u dhaxaysa CD-yada iyo xisaabaadka kaydka dhaqameed. Waxaad bixinaysaa dulsaar ka sarreeya koontada kaydka dhaqameedka waxaadna oggolaatay wax kala beddelasho bishii, si aad u hesho lacagta caddaanka ah marka loo baahdo. Qaar badan oo ka mid ah xisaabaadka kaydka onlaynka ah ee wax soo saarka sare leh ma laha deebaaji ama khidmad ugu yar.
Xisaabaadka suuqa lacagtu waxa ay aad ugu shabahaan xisaabaadka kaydka wax soo saarka sare, laakiin leh dulsaar wax yar ka sareeya iyo shuruudaha dhigaalka oo sarreeya. Xisaabta suuqa lacagta ee Bangiga CIT, tusaale ahaan, waxa uu bixiyaa dulsaar dhan 1.85% laakiin waxa uu u baahan yahay deebaaji ugu yar oo ah $100.
Mid kasta oo ka mid ah koontooyinkan ayaa lacagtii aad dhigatay khatar ku jirto. Caymiska FDIC wuxuu dammaanad qaadayaa lacagtaada, xitaa haddii bangiga haynta koontadaadu uu noqdo mid musalafsan.
Meesha Marka Hore Xooga La Saaro
Markaad bilowdo maalgashiga, way adkaan kartaa inaad kala doorato noocyada kala duwan ee xisaabaadka maalgashiga. Ku billow adigoo ka fikiraya inaad xoogga saarto qiimaha aad inta badan aragto.
Marka hore, ku tabaruc ku filan qorshayaasha hawlgabka ee uu kafaalo qaaday loo-shaqeeyahaagu si aad u hesho qiimaha buuxa ee ciyaarta ay shirkaddu bixiso. Waa lacag lacag la'aan ah iyo isla markiiba ku soo noqoshada maalgashigaaga. Haddii aadan hubin in loo-shaqeeyahaagu uu soo jeedinayo tabaruc, la xiriir Waaxda Kheyraadka Shaqaalaha si aad u hesho xeeladaha ugu casrisan.
Midda labaad, waa inaad yareysaa xadka tabarucaadka ee xisaabaadkaaga canshuurta laga jari karo-haddii aad u kaydsato inta badan hawlgabka ama kulliyadda ilmahaaga. Faa'iidooyinka canshuuraha ee xisaabaadkan ayaa kuu keydinaya lacag aadan rabin inaad si aan loo baahnayn ugu wareejiso Adeer Sam.
Ugu dambeyntii, waxaad gelisaa raasumaalka xad-dhaafka ah akoonnada dillaaliinta. Tani waxay kaa caawinaysaa inaad kaydsato yoolalka mustaqbalka fog, tusaale. B. iibsashada guri fasax ah toban sano gudahood.
Xusuusnow: Dhammaan shuruudaha kor ku xusan waxay u malaynayaan inaad dib u bixisay dhammaan deynta kaarka deynta ee wax-soo-saarka sare leh oo aad leedahay miisaaniyad adag.
Haddii aadan waxyaalahan weli samayn, hagaaji intaadan maalgelin.
7 Xeerka Dahabka ah ee Lacagta lagu Maalgelinayo Suuqa Suuqa
Waxaa laga yaabaa inaad tahay qof bilow ah, laakiin taasi micnaheedu maahan inaad sameyso khaladaad qaali ah. Raac toddobadaas xeer ee dahabka ah waxaad ku socotaa wadadii guusha.
1. Ciyaar Ciyaarta Dheer
Waligaa ha ku maalgashan ogeysiis gaaban. Suuqa wuxuu ku socdaa wareegyo dabiici ah oo aan la cayimi karin. Maalgelin ka yar saddex ilaa shan sano kuma siin doonto waqti kugu filan oo aad ku buuxiso qiimaha hantidaada haddii aad la kulanto gaabis waqti qaldan.
2. Ukun kasta ha ku ridin dambiil
Ha ku darin lacag aad u badan hal ficil ama xiriir oo burburin kara hantidaada.
Ku kala duwanaanshaha ETF-yada qiimaha jaban oo ka fogow xulashada saamiyada.
3. Samee Caadada Billaha ah ee Maalgelinta
In kasta oo cinwaannada cinwaanku ay si joogto ah u dalbanayaan suuq sare ama hooseeya, haddana ma jiro qof si dhab ah u go'aamin kara halka aan ku jirno wareegga mar kasta.
Habka ugu fiican ee lagu hubin karo inaad wax iibsanayso waqtiga ku habboon waa caadada billaha ah ee maalgelinta. Maalgeli bil kasta iyada oo aan loo eegin amniga ama waxqabadka suuqa.
4. Keliya Maalgeli Waxa Aad Kharashkaaga Siiso In Aad Khasaarto
Maalgashigu waa halis. Inkasta oo isbeddelka muddada-dheer uu kordhay waqtiyadii la soo dhaafay, haddana waxaa jiray sannado hoos u dhac qoto dheer.
Haddii aad u baahan tahay lacag wakhti gaaban ah ama aad rabto in aad lumiso 20% hadhaaga akoonkaaga, waxa aad haysaa xanuun. Ha abuurin lacagahan.
5. Ha Hubin Jeebkaaga Maalin kasta
Maalgashigu waa meesha kaliya ee istaraatijiyad madax-ilaa ciid ay noqon karto habka ugu caqliga badan. Ku shub koonto otomaatig ah xisaabaadkaaga maalgelinta bil kasta oo dib u eeg faylalkaaga saddex ilaa lixdii biloodba mar.
Tani waxay yaraynaysaa halista iibka argagaxa marka suuqa uu dumo ama lacag badan ayaa urursata marka wax waliba u ekaadaan qaansoroobaad iyo balanbaalis.
6. Hoos u dhig Khidmadahaaga
Miisaaniyadaha maalgashiga iyo ETF -yada ayaa leh saamiyada kharashka. Dilaaliin badan ayaa ka qaata khidmadda gorgortanka iyo bixiyeyaasha maalgashiga, la-taliyayaasha maaliyadeed Robo-lataliyayaasha, waxay ka qaadaan khidmadda maamulka. Dhammaan kharashyadaan waxay yareeyaan hantidaada waqti ka dib.
La socoshada maaliyadaha tusmada iyo ETF -yada waxay haysaa lacag yar iyadoo la hubinayo in waxqabadka suuqa uu lacag badan jeebkaaga ku hayo.
7. Dhageyso Talooyinka Maalgelinta ee Warren Buffett
Warren Buffett ayaa laga yaabaa inuu yahay maalgashadaha ugu caansan taariikhda. Hal jiil oo kaliya, wuxuu ku abuuray nasiib balaayiin doolar. Wax ka baro talooyinkiisa ku saabsan sida loo maalgashado mustaqbalkaaga!
"Qof ayaa fadhiya hooska maanta sababtoo ah qof ayaa geed beeray waqti hore."
"Marnaba ma maalgashado wax aanan fahmin."
"Haddii aadan heli karin hab aad lacag ku kasbato intaad huruddo, waad shaqayn doontaa ilaa aad ka dhimato."
"Suuqa saamiyada waa hab lacag looga wareejiyo bukaanka aan dulqaadka lahayn bukaanka."
"Looma baahna in la sameeyo waxyaabo aan caadi ahayn si loo gaaro natiijooyin aan caadi ahayn."
Sideen Ku Bilaabayaa Maalgashiga Maanta?
Habka ugu fudud ee maanta loo maalgashan karo taleefankaaga ama laptop -kaaga waa inaad koonto ku furto Acorns.
Acorns waxaa loo doortay mid ka mid ah codsiyada maalgashiga ugu wanaagsan ee DollarSprout ee 2018.
Waa barnaamij maal-gashi yar oo ku habboon bilowgayaasha. Saldhigga, Acorns Core, wuxuu ka bilaabmaa kaliya $ 1 / bishii iyadoo la siinayo $ 5 gunno saxiix ah oo bilaash ah isticmaaleyaasha cusub.
Markaad wax ku iibsato debit ama kaarka deynta ee ku xiran, Acorns waxay soo koobtaa dollarka soo socda oo lacagtaada kaydisa. Waxaad ku kordhin kartaa wareegyadaada 2x, 5x, ama 10x.
Ka sokow isu-ururinta, waxaad habeyn kartaa soo noqnoqoshada maalinlaha ah, toddobaadlaha ah, ama maalgashiga billaha ah ee faylalkaaga Acorns. Adeegga Lacagta La Helay waxa kale oo uu ka helaa fursado dib-u-celin ah oo kaash ah in ka badan 200 oo la-hawlgalayaasha ah oo si toos ah u maalgeliya kaydkaaga markaad wax iibsanayso.
Abuuritaanka koonto waxay qaadataa dhowr daqiiqo oo kaliya. Markaad dhammaystirto astaantaada, Acorns waxay bixisaa mid ka mid ah shanta ikhtiyaar ee faylalka ku saleysan macluumaadka aad bixiso. Si kastaba ha ahaatee, waxaad haysataa ikhtiyaar aad ku burin karto soo jeedintaada haddii aad doorbidayso faylal faylal badan leh ama ka yar.
Madalku wuxuu si otomaatig ah u soo celiyaa faylalkaaga wuxuuna dib u maalgeliyaa dhammaan lacagaha saami-qeybsiga si loo sii kordhiyo maalgashigaaga.
Acorns waa ikhtiyaar caqli gal ah maalgashadayaasha iskood u shaqeysta iyo kuwa cusub. Marka koontadaadu korodho, $ 1 ilaa $ 3 bishiiba khidmaddu isma beddeli doonto, taas oo ka dhigaysa adeegga mid raqiis ah waqti ka dib.
25 Maalgashi ee Ugu Fiican Kanada | Tilmaan Buuxo
10ka Sanduuq ee ugu Fiican Vanguard Sanadka 2022
Maalgelinta Lacagta Kanada | Tilmaan-Talaabo Tallaabo-fudud ah oo Fudud
Sida Lacag Loogu Sameeyo 50000 oo Doollar: Hagaha Tallaabo-Tallaabo ah
Fiiri Faallooyinka (1)
Faallooyinka Techsupportangel 2022: Daahfurka Daacadda ah ee adeegsadayaasha
Faallooyinka Foap 2022 | Sharci ama Fadeexad | Samee Lacag Culus
Sida loo iibsado Adobe Stock si loo soo celiyo 2022.
Helitaanka Adobe Stock Waxay noqonaysaa nidaamka maalinta marka loo eego dhinaca maalgashiga. Waxaad ka heli kartaa sida…
Sida Loogu Iibsado Monero Si Faa'iido Leh 2022 MarketCap, Macluumaad
Suuqa cryptocurrency wuxuu ku fiday Bitcoins iyo Ethererum, iyo had iyo jeer, qadaadiic cusub ayaa helaysa…
10ka ugu wanaagsan ee Penny ee Robinhood 2022 | Eeg Qiimayaasha
Malaayiin maalgashadayaal ah ayaa adeegsada abka kale sida Robinhood si ay uga ganacsadaan laakiin raadinta tan dhabta ah iyo…
Maalgelinta hantida ma-guurtada ah ee jajaban waa mawduuc aad u kulul suuqa guryeynta hadda. Waxaa loo dalacsiinayaa sida…